Maxaan sameeyaa haddii meesha laga qaato uusan aqoonsan Transfer Galaxy? – Transfer Galaxy
Qaadashada lacag caddaan ah / kaash ah
Maxaan sameeyaa haddii meesha laga qaato uusan aqoonsan Transfer Galaxy?
Maadaama hawl-wadagalaheena deegaanka ah ay ka shaqeeyaan qaadashada lacagta caddaanka ah / kaashka ee lacagta la soo wareejiyey / xawaalada la soo diray deegaan ahaan iyagoo na matalaya, waxaa laga yaabaa inaysa aqoonin magaca Transfer Galaxy.
Fadlan xusuusnow inaad soo qaadato AQOONSIGAAGA sawir leh, koodka lacag bixinta iyo magaca hawl-wadagalaheena deegaanka, oo aad ka heli karto fariinta qoraalka.
Haddii aad weli lakulanto dhibaato, fadlan weydii soo dirahaaga inuu la xiriiro kooxdeena Taageerida Macaamiisha. Soo diraha ayaa awoodi doona inuu kuu habeeyo caawimaada taleefanka.